Scot Nepal – Page 5
काठमाडौँ : न त छाक टर्ने, न त पेट भरिने । नखाए पनि हुने, नखाँदा परि नपरिने अनावश्यक वस्तुमा समेत ठूलो मात्रामा पैसा खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्ने भए...
चर्चित गायक मिका सिंहको दुलही भेटियो, आखिर को हुन् त मिकाको जिन्दगीमा आउने अभिनेत्री ?
मिका सिंह मिका दी वोहतीमा विवाहको लड्डू खान तयार छन् । मिका सिंहसँग विवाह गर्न दुलही पनि आएका छन् । मिकाको स्वयंवरमा आएका युवतीले उनलाई प्रभावित गर्ने कुनै मौका छोडिरहेका छैनन् ।...
मलाइका अरोरा स्वीमिङ पुलमा ब्रा लगाएर नुहाइरहेकी थिइन्, अर्जुन कपुरले बनाए यस्तो भिडियो
बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोरा आफ्नो बोल्ड स्टाइल र फिटनेसका कारण निकै चर्चित छिन् । यसका लागि पनि नायिका आफ्नो लभ लाइफको चर्चामा रहेकी छिन् । मलाइका अरोरा भर्खरै अर्जुन कपुरको जन्मदिन मनाएर...
शिल्पाले पिडा पोख्दै भनिन्- २२ वर्षको हुँदा अक्षयसँग भर्जिनिटी गुमाए तर उसले धोका दिएर गयो….
शिल्पा शेट्टीले २२ वर्षको उमेरमा आफ्नो भर्जिनिटी गुमाएकी थिइन् भन्ने थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ । यो ९० को दशकको समय थियो जब अक्षय कुमार र शिल्पा शेट्टी दुवैलाई बलिउडको उदीयमान सुपरस्टार मानिन्थ्यो।...
के तपाईंलाई थाहा छ ? महिलालाई सेक्स भन्दापनि यि कुरा बढी मनपर्छन्
से -क्स महिला–पुरुष दुबैका लागि निकै आवश्यक हुन्छ । से /क्ससँग स-म्बन्धित थुप्रै अनुसन्धानहरु प्रकाशित पनि भइसकेका छन् ।अनुसन्धानले नै महिलाले भन्दा पुरुषहरुले से’- क्सको बारेमा बढि सोच्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।...